Apple waxay joojineysaa saxiixa iOS 13.1.3, hoos udhaca suurto gal ma ahan | Wararka IPhone
Apple wuxuu joojiyaa saxiixa iOS 13.1.3, hoos u dhigista suurtagal maaha
Cusboonaysiinta kuma istaagayaan macruufka, tusaale ahaan waxay tahay in shalay aan horey u haysanay macruufka 13.2.2 oo dhowaan la sheegay. Tan, waxa Apple damacsan yahay inuu xalliyo mashaakil taxane ah oo ay iOS ku jiidanaysay duulimaadka, iyada oo aan loo qaabaynin sida ay u amar ku bixinayaan shirkadda bilowgeeda. Noocaan ugu dambeeyay wuxuu xalliyaa dhibaatooyinka ku saabsan maaraynta xusuusta RAM iyo xirmooyinka otomaatigga ah ee codsiyada. Hadda Apple waxay joojisay saxiixa macruufka 13.1.3 sidaa darteed ma awoodi doontid inaad hoos u dhigto nooc kasta oo ka mid ah iOS 13.2, qalabkaas ayaa hubaal ah inuu dhammaaday.
Waa run in warku uusan umuuqan mid xiiso badan, laakiin inta badan, gaar ahaan kuwa ku raaxeysata aaladaha duugga ah, qaladaadka waxqabadka ayaa la ogaadaa inay waxyeelo daran u geystaan ​​dadka isticmaala cusbooneysiinta qaarkood, tani waa sababta sababtae Apple waxay sii wadaa inay saxiixdo noocyadii hore ee macruufka, iyo sababta ay isticmaaleyaashu u fuliyaan hoos u dhacan taas oo u dhiganta soo degsashada nooca IOS. Dhibaatada, dabcan, waa in Apple ay xaqiijiso nooca iOS iyo saxeexa internetka si markaas loo fulin karo, taas oo ah, marka nooca iOS aan la saxiixin, waa wax aan macquul aheyn in lagu rakibo qaab dhaqameed iPhone-ka. .
Hadda Apple wuxuu ku dhawaaqay macruufka 13.1.3 inuu yahay mid duugoobay oo joojiyay saxiixiisa, markaa ma awoodi doontid inaad dib ugu laabato haddii aad ku shaqeyneyso iOS 13.2 ama nooc ka mid ah noocyadeeda dambe. Waxaa la gaadhay waqtigii lala qabsan lahaa, in kasta oo aan ku talinayo had iyo jeer in IPhone-ka la cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeya ee la heli karo si looga fogaado cilladaha amniga ee suurtogalka ah ee aan kaliya gelineynin xogtayada qatarta ku jirta, laakiin sidoo kale xogta qaraabadayada ee aan ku hayso qalabkeena macruufka ah ee waajib ku ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple wuxuu joojiyaa saxiixa iOS 13.1.3, hoos u dhigista suurtagal maaha
Midawga Yurub ayaa hada indhaha ku haya Apple Pay
Waqtiga hawada ee iOS 13.3 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xad u yeelatid wicitaanada iyo fariimaha